यस्तो अवसर छुटाउँदै त हुनुहुन्न ? आजै सम्पर्क राख्नुहोस् - Wash Khabar
यस्तो अवसर छुटाउँदै त हुनुहुन्न ? आजै सम्पर्क राख्नुहोस्
२९ चैत्र २०७५, शुक्रबार १२:४८ 318 पटक हेरिएको
काठमाडौ : तपाई वैज्ञानिक हुनुहुन्छ ? इञ्जिनियर, रसायनशास्त्री, प्राविधिक वा वातावरणविद पो हुनुहुन्छ कि ? अनुसन्धानकर्ता, विद्यार्थी, परामर्शदाता या वायु र ध्वनि प्रदुषण मापनको क्षेत्रमा काम गर्न रुचि राख्नुहुन्छ ?
तपाई सबैका लागि उपयुक्त हुने ‘वायु र ध्वनि प्रदुषण मापन तालिम’ ले तपाईलाई कुरिरहेको छ । मौका आउँछ पर्खिदैन । तपाईले समयमै सम्पर्क नराखे यो महत्वपूर्ण अवसर गुम्न सक्छ । आगामी अप्रिल २६ देखि २८ गतेसम्म आयोजना हुने भएपनि फारम भर्ने म्याद अबको केही दिन मात्र बाँकी रहेको छ । तालिम आयोजक वातावरण र जनस्वास्थ्य संस्था (एन्फो) का अनुसार यही अप्रिल १५ सम्म मात्र फारम भर्न सक्नुहुनेछ ।
तालिम वातावरण र जनस्वास्थ्य संस्था (एन्फो) र Envirotech Instruments (Pvt.) Limited, New Delhi, India ले संयुक्त रुपमा आयोजना गर्न लागेको हो ।ले संयुक्त रुपमा आयोजना गर्न लागेको हो ।
फारम भर्न र तालिम सम्बन्धी थप जानकारी लिन तलको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोला